အီလက်ထရွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒြပ်ဆွဲအား၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်၊ အားပျော့
ပိုစီထရွန် (also called antielectron)
Richard Laming (၁၈၃၈–၁၈၅၁),
George Johnstone Stoney (1874) and others.
ဂျေဂျေ သော်မဆင် (၁၈၉၇)
[7003182288848450000♠1822.8884845(14)]−1 u[note ၁]
3018839782351300000♠−1 e[note ၂]
အီလက်ထရွန် သည် အက်တမ် တစ်ခုတွင် အခြေခံကျသော အမှုန်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ် အမဓာတ်( negative charge) ဆောင်သည်။ နျူကလိယ (Nucleus) ကို လှည့်ပတ်နေသည်။ လှိုင်းသဘာဝရော အမှုန်သဘာဝပါဆောင်သည်။ အီလက်ထရွန် အရေအတွက်နှင့် ပရိုတွန် အရေအတွက်ကို အခြေခံ၍ အိုင်းယွန်း (ion) များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ရှေးအခါက ဒြပ်စင်တို့၏ အသေးငယ်ဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းသည် အက်တမ်ပင်ဖြစ်၍၊ ထိုထက်ငယ်သော အစိတ်အပိုင်း မရှိနိုင်ဟု ယူဆလာခဲ့ကြလေသည်။ သို့သော် ဆာ ဂျေဂျေ သွန်မဆင် ဆိုသူ ကိန်းဘရစ်ချ် တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခကြီး တစ်ဦးက အက်တမ်အောက် အလွန်ငယ်သော အစိတ်အပိုင်းတို့ရှိကြောင်းကို ခရစ် ၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင် ရှင်းလင်းပြသ၍ ထိုအစိတ်အပိုင်းတို့ကို အီလက်ထရွန်ဟု အမည်ပေးခဲ့လေသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် ဓာတုဒြပ်စင်တို့တွင် အပေါ့ဆုံးဖြစ်၍ ယင်း၏အက်တမ်အလေးဆသည် ၁.ဝဝ၈ မျှသာ ရှိ၏။ အီလက်ထရွန်တစ်ခု၏ အလေးချိန်မှာ ထိုဟိုက်ဒြိုဂျင် အက်တမ်၏ အလေးချိန်ကို အပုံတစ်ထောင့် ရှစ်ရာ လေးဆယ့် ငါးပုံပုံလျှင် တစ်ပုံ (၁/၁၈၄၅) ခန့်သာရှိလေသည်။
↑ Farrar, W.V. (1969). "Richard Laming and the Coal-Gas Industry, with His Views on the Structure of Matter". Annals of Science 25 (3): 243–254. doi:10.1080/00033796900200141.
↑ Arabatzis၊ T. (2006)။ Representing Electrons: A Biographical Approach to Theoretical Entities။ University of Chicago Press။ pp. 70–74။ ISBN 0-226-02421-0။
↑ Buchwald၊ J.Z.; Warwick၊ A. (2001)။ Histories of the Electron: The Birth of Microphysics။ MIT Press။ pp. 195–203။ ISBN 0-262-52424-4။
↑ Thomson, J.J. (1897). "Cathode Rays". Philosophical Magazine 44 (269): 293–316. doi:10.1080/14786449708621070.
↑ Thomson၊ J.J. (1906)။ Nobel Lecture: Carriers of Negative Electricity။ Nobel Foundation။ 10 October 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-08-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ ၆.၄ P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell, "The 2014 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants". This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: . National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.
↑ Agostini M. et al. (Borexino Coll.) (2015). "Test of Electric Charge Conservation with Borexino". Physical Review Letters 115 (23): 231802. doi:10.1103/PhysRevLett.115.231802. Bibcode: 2015PhRvL.115w1802A.
↑ JERRY COFF။ 10 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အီလက်ထရွန်&oldid=723910" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။